Iingcebiso ekubambeni amaqabane aKhohlayo ngooVimba beLizwi abangamaDijithali | Izisombululo ze-OMG
Iingcebiso ekubambeni amaqabane aBakhohlisi abanamaRekhodi eLizwi edijithali
Wakha wafuneka ukugcina iso kwiingxoxo zomnxeba zeqabane lakho lobomi? Ukuthenga irekhodi yelizwi eliphantsi (phantsi kwe- $ 120) kuya kuyikhathalela imicimbi yakho. Ezi rekhoda zihlala zisetyenziswa ngabafundi abangaphantsi ukurekhoda iiklasi zabo, okanye ngababhali xa behambisa iintlanganiso. Yinto eyongeziweyo njengaleyo yabameli babucala bayingenisayo emakhayeni akho okanye ezimotweni, ngokufanayo nento oyifumana kumabonwakude abonisa amagcisa.
Ukuba ayisiyongxaki enkulu ukukhumbula ngaphambi kokuba uqale ujonge iqabane lakho lobomi ngesixhobo, funda izinto ezingafunekiyo kwiziza ezikuthengisela izixhobo kunye nomgca wokuphanda imithetho yelizwe lakho malunga nokujonga okanye ukurekhoda iingxoxo.
Xa ujonge irekhoda yelizwi, yenza inqaku lokufumana enye ene-AVR (izwi elungiselelwe ukurekhoda) umthamo, okanye ixesha elide kakhulu lokurekhoda; iirekhodi ezirekhodiweyo ezixabisa kakhulu, i- $ 100 +, imvume ukuya kwi-500 + ixesha elide lokurekhoda. Kwithuba elingafakwanga lokuba umda wezezimali, ngokuqinisekileyo kufuneka ubenesenzi eshicilelweyo.
Endaweni yokusebenzisa isishicileli esikhulu selizwi, ungasebenzisa isishicileli esenziwe kwilizwi ukurekhoda iingxoxo ngomnxeba iqabane lakho lobomi eliqhele ukukuthintela. Ngokucacileyo kukho umthamo omkhulu weerekhodi zekhompyuter ezongezelelekileyo ezine-AVR, kwaye kukwakho nezandi ezirekhodwa ngokurekhodwa kweefowuni, ezicwangciselwe ngokucacileyo iifowuni. Andikhange ndibone ilizwi elishicilelweyo lokurekhoda umnxeba okwangoku okwenzelwe ukugcina iso kwiifowuni, ngenxa yoko andinakumisela nto; uninzi lweerekhodi zokuzibophelela kweefowuni endizifumeneyo zifuna ukuba umthengi aqalise amandla okurekhoda, okanye abathumele emva kokuba kwenziwe ingxelo ebhaliweyo.
Ukuba ukhangela izixhobo zakho zokusebenza ezisetyenziselwa ukurekhoda iingxoxo, khumbula ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kwerekhodi yelizwi eliphambili kunye nerekhodi ekhompyutheni yelizwi lePONE.
Kutheni usebenzisa irekhoda yezwi ngaphezulu kweRekhodi yefowuni yelizwi?
Kuba iirekhodi ezirekhodiweyo ze-PHONE (ukuya kuthi ga kuviwo lwam kunye ne-amazon zindazise), lumkisa umxhasi ngefowuni kwiiakhawunti, kwaye afune imisebenzi yezandla phambi kwengxelo yegajethi.
Ngelixa irekhoda yezwi ene-AVR ngokwemvelo irekhoda nantoni na ixesha elide ichaza isandi.
Yithathele ingqalelo njengeekhamera ezifihliweyo ezirekhoda yonke into (irekhoda eliqhelekileyo yelizwi), iikhamera ezifihliweyo zeVS ezinokurekhoda xa zisahlula intuthuko (irekhoda yelizwi ene-AVR) iikhamera zeVS ezifuna ukuba umthengi acofe irekhodi elibomvu (irekhodi yelizwi le-PHONE).
Ukuyichukumisa ngokuthe ngcembe, iingxelo ezirekhodiweyo zamazwi AZIDLANGI ngokurekhodwa kweelizwi zekhompyuter zarekhodwa.
Ndingalufihla Phi Ilizwi Lam Lokubuyiswa Kwelizwi?
Ngaba iqabane lakho lobomi liyasebenza ngaphandle kwendlu? Eyona ndawo intle yokufihla iphantsi kweemoto zabo, okanye ithuba elivelileyo lokuba unesinye sezihlalo ezigubungela iipokotho ngasemva, uyikhuphele apho kukho i-smidgen kuphela epokothweni. yenza inqaku lokuyifihla ngaphambi kokuba basebenzise isithuthi somsebenzi, kwithuba elingaphandle lokuba unerekhoda nge-AVR, ngeloxesha awunakho kuxinzelelo malunga nokuza kufutshane kwindawo.
Njengoko kubonisiwe ziingcali zabucala, ukungaziphathi kakuhle kwesininzi kunengxoxo zabo ngelixa besiya emsebenzini, kwaye begoduka, ngethuba lokuba bengazukuhlangana kunye namaqabane abo ngaloo mini. Kwimeko apho ungenakukufihla oku kwii-autos zabo rhoqo, zama ukwenza njalo embindini weveki, xa bephambanisa ukukhohlisa. Kwimeko apho uthenge into enexabiso elininzi, ngokufana nesishicileli esincinci, unokuzama ukuyifihla kwiiphothifoliyo zabo okanye kwiitot, nangona oko kuyingozi kakhulu njengoko ndingathanda ukucinga.
Ngaba iqabane lakho lobomi lihlala ekhaya? Iindawo ezilungileyo zokufumana ukuphinda umfazi wasekhaya okanye iqabane ekhaya likufuphi ngqo nefowuni, i-PC (skype okanye ezinye ii-voip application), okanye umbhede (kwimeko apho bakhetha iifowuni). Cinga ngokufumana iirekodi ezimbini ezinesidima kunokuba unendleko enye ukuze ube nokuzahlula indlu kunye nokujonga indlu iphela.
Kwimeko apho unesithuthi esongezelelekileyo ekhaya kuya kufuneka ucinge ukuba iyakucaphukisa into yokuba ngezixhobo zakho ezisitheleyo nazo, awunakuqiniseka ukuba omnye wakho obalulekileyo okanye iqabane lihlala ekhaya xa usiya emsebenzini.
Ngaba ucinga ukuba iqabane lakho lineefowuni ezili-12 ze-PM? Indawo efanelekileyo yokugcina isixhobo sakho sokufihla singaphakathi kwindlu yangasese. Ukuba uyazi apho bakhoyo, mhlawumbi baya kutshixeka kumagumbi abatyeleli, ungaba nokuyifihla apho; okwangoku uninzi lwezinto ezibonisa indawo yokuphamba ukuya kwigumbi lokuhlambela, kuba akukho nto ikrokrisayo xa ubona iqabane liphuma kwigumbi lokuhlambela ngo-12 PM kubajongile bangena egumbini.
Andicingi ukuba kufuneka uxinzeleleke ukuba isishicileli selizwi sakho sikude kakhulu okanye asikho, ngenxa yokuba ndifunda phantse lonke uphando ngaphambi kokuba ndithenge nantoni na kwiwebhu, ukuba nje ikwigumbi elifanayo thatha isandi (Ndithenge esinexabiso eliphantsi btw). Amagumbi ethu apha aqheleke i-20 × 15 yeenyawo, azanywa egumbini, asebenza ngokungaqhelekanga, azanywa kwigumbi lokuhlambela, asebenza kude kakhulu.
Xa uphonononga ukurekhodwa kwesandi, ngakumbi xa kurekhodwa kwimoto, qiniseka ukuba ukhangela indawo ekurekhodwa kwesandi ukujonga kwintetho yabantu.
Kule miqolo uya kutshisa ixesha elincinci kwaye uqinisekise ukuba ufumana ubungqina obudinga ngokwenene.
Ngethamsanqa kunye nokuhlola okuonwabisayo!
4282 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje